Soo dejisan MKV Player 2.1.17 – Vessoft
Soo dejisan MKV Player
MKV Player – fudud ah si ay u isticmaalaan ciyaaryahanka warbaahinta, ogolaanaysa in aad ku ciyaari videos qaab MKV. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan, badbaadin iyo saxaa Playlists. MKV Player taageertaa muuqaalada caadiga ah iyo u saamaxaaya in ay bedesho xawaaraha playback ah, dib u dhac ah subtitles iyo ururada file. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka raadin files oo ay qabsadaan screenshots ah. MKV Player leeyahay interface fudud oo dareen leh.
Cayaar iska video qaab MKV
Taageerada qaabab loo jecel yahay
MKV Player Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Kodi 16.1
English, Українська, Français, Deutsch... VLC 2.2.4
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahan warbaahinta ayaa sheegay in ay taageertaa qaabab kala duwan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abaabuli maktabadda music iyo subtitles u arkaan.
Ciyaaryahan Media Si sahlan ay u isticmaalaan ciyaaryahanka audio. Software wuxuu taageeraa qaabab badan oo maqal ah oo awood u si loo soo dajiyo ka kooban oo dheeraad ah si ay ula files audio shaqeeyaan.
English, Français, Español, Deutsch... 5KPlayer 4.1
Ciyaaryahan Media ciyaaryahan warbaahinta la set oo ah hawlaha iyo qalabka waxtar leh. software The kuu ogolaanayaa inaad soo bixi videos ka adeegyada video caan ah.
Streaming video software The si aad u eegto television Streaming ka soo adduunka oo dhan. software waxaa ka mid ah kanaallada badan TV caalamiga ah iyo idaacadaha of noocyo kala duwan.
Horumarinta Panetarium desktop ayaa si aad u eegto Samada samada 3D. Software waxay bixisaa qaab tayo sare oo ka mid ah xiddigaha kala duwan, xiddigaha iyo waxyaabaha kale ee meel dibadda ah.
English, Українська, Français, Español... FreeMind 1.1.0 iyo 1.0.1
qabanqaabiyayaasha Agabka in ay la shaqeeyaan maabka maskaxdaada. Software ayaa awood u si ay u hirgeliyaan fikradaha iyo qorshayaasha qaab qoraal ama foomka nidaamada.
العربية, English, Українська, Français... Manycam 5.4.1.1
Webcams software ah in rogi saamaynta muuqaalka kala duwan si ay warbaahinta video. software waa ay awoodaan in ay isticmaalaan hal webcam in baahiyey in codsiyada kala duwan.
Editor Audio fudud An in la isticmaalo qalab si ay ula files audio shaqeeyaan. software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah sifooyinka waxtar leh oo iyaga ku fidin karaa by xira daro.